Ciidanka booliska Australia oo toogasho ku dilay nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Soomaaliya – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka booliska Australia oo toogasho ku dilay nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Soomaaliya
Ciidamada booliska dalka Australia ayaa habeenkii xalay toogasho ku dilay nin Soomaali ah oo magaciisa lagu sheegay Yacquub Kheyre, kaas oo fal afduub iyo argagaxiso ah ka geystay dalkaasi.
Yacquub Kheyre ayaa la sheegayaa inuu ka tirsanaa kooxda Daacish, waxaana xalay lagu toogtay howlgal ay ciidanka booliska ee dalka Australia ka sameeyeen magaalada Melbrourne.
Toogashada Yacquub loo geystay ayaa la sheegayaa inay ka dambeysay kadib markii uu afduub kula kacay haweeney u dhalatay dalkaasi oo markii dambe nolol looga soo bad-baadiyay.
Taliska booliska dalka Australia ayaa sheegay in ninkaan sanadkii 2009 loo xiray eedeyn ku saabsan inuu qorsheeyay weerar ka dhan ah xero militeri oo ku taala magaalada Sydney, balse waxaa xilligaasi lagu waayay wax dambi ah.
Howlgalkaasi ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay 1 askari, waxaana ku dhaawacmay seddax kale, kadib markii ay labada dhinac rasaas is-dhaafsadeen.
Taliyaha ciidanka booliska gobolka Victoria Graham Ashton ayaa sheegay in Kheyre uu qadka teleefoonka kula hadlay teleefishin ku yaalla magaaladaasi Melbourne, isagoona ku wargeliyay inuu ka tirsan yahay kooxda Daacish.
Qoyska Yacquub Kheyre ayaa isagoo seddax sano jir ah geeyeen dalka Australia, kadib markii ay deganaansho ka heleen dalkaasi.
Yacquub Kheyre ayaa dalka Australia la keenay isagoo seddax sano jir ah, waxayna isaga iyo qoyskiisaba qaxooti ku ahaayeen dalka Kenya, iyagoona kadib deganaanshiyo ka heleen dalkaasi Australia.
Marxuumka la dilay ee Yacquub Kheyre ayaa la sheegayaa inuu ahaa qof go’doonsan oo muddo hore qosykiisa ka baxsaday.
Dadka Soomaalida ah ee ku nool dalka Australia ayaa walaac aad u xoogan ka muujiyay dhacdadaan, waxayna arrintaan horseedi kartaa in muwaadin kasta oo Soomaali ah uu tuhun soo galo, dabagal aan caadi ahayn lagu sameeyo.